साहित्य मनोरञ्जन – Page2– दाङ खबर
Jun72019 by DangkhabarNo Comments
दाङ, जेठ २४ । दङाली युवा देवराज आचार्यले दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेलाई साथ दिएका छन् । क्यामेरा म्यानको भूमिकाबाट नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आचार्यले आफ्नो डेभ्यू निर्देशन ररहेको गीतमा दुवै हात गुमाएकी घिमिरेलाई पहिलोपल्ट मिडियामा सार्वजनिक गराएका मात्रै छैनन्–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि समाजमा सम्मानित जीवन बिताउन पाउनुपर्दछ भन्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन् । आर एस डिजिटलको प्रस्तुति रहेको बिक्रम भण्डारीको आधुनिक गीत ‘यो मन भित्र’ को म्युजिक भिडियोमा निर्देशक आचार्यले दुवै हात गुमाएकी मेघालाई मोडलिङ गराएका छन् । म्यूजिक नेपालमार्फत् सार्वजनिक भएको गीत मेलिना राईको सुमधुर स्वरमा सजिएको रहेको छ । मनोज बिक्रम भण्डारी र श्रीकृष्ण बम मल्लको संगीत रहेको गीतमा देवराज आचार्यले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियोलाई पदम सुवेदीले सम्पादन गरेका छन् । राम केसीले छायाङ्कन गरेको उक्त म्युजिक भ
May202019 by DangkhabarNo Comments
जेठ ६ । नायिकाद्धय बर्षा सिवाकोटी र बर्षा राउतविच चलचित्र क्षेत्रमा चर्को दुश्मनी रहेको चर्चा चल्छ । उनीहरुले गर्ने विभिन्न खालको क्रियाकलापले पनि उनीहरुविचमा दुश्मनी रहेको देखिन्छ । तर, नायिका बर्षा राउत आइतबार नायिका बर्षा सिवाकोटी अभिनित चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ हेर्न कुमारी हल पुगेकी छिन् । चलचित्र हेरेर निस्किएकी बर्षा राउतले आफू र बर्षा सिवाकोटीविच कुनै पनि खालको दुश्मनी नभएको बताइन् । उनले भनिन्–‘मैले पहिलेदेखि नै यो चलचित्र हेर्ने सोच बनाएकी थिएँ । आज जुर्यो । चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको रहेछ । वर्षाको काम मन पर्यो ।’ नायिका सिवाकोटीले चलचित्र क्षेत्रमा आफूहरु मिल्ने साथी भएपनि मिडियाले नै दुश्मन बनाइदिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्–‘हामी बारम्बार स्पष्ट पार्दापार्दै थाकिसक्यौं । हामीविचमा कुनै पनि खालको दुश्मनी छैन । सायद, नाम एउटै भएर पनि मिडियाले यसलाई मसला बनाएको होला ।’ द
May192019 by DangkhabarNo Comments
कप्समा नेपाल प्रहरीको चरित्र
काठमाडौं ,जेठ ५ । प्रायः नेपाली फिल्ममा नेपाल प्रहरीको चरित्र प्रायः नकारात्मक देखाउँदै आएका बेला चलचित्र ‘कप्स’ (सत्य सेवा सुरक्षणम्) मा दर्शकले उनीहरूको चरित्र सकारात्मक देख्न पाउनेछन् ।विश्वमा राम्रो प्रहरीका रूपमा नेपाली प्रहरीले बनाएको छविलाई आफूहरूले यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरेको यसका निर्देशक सम्राट सापकोटाले बताएका छन् । प्रहरीले राम्रो काम गरेको भए पनि उनीहरूमाथि जनताको हेराइ र बुझाइ किन नकारात्मक छ भन्ने विषयलाई आफ्नो सिनेमाले चिरफार गर्ने पनि निर्देशक सापकोटाले बताए । सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा निर्देशक सापकोटाले भने, ‘नेपाल प्रहरी अहिले पनि विश्वमा सक्षम प्रहरी भनेर चिनिएको छ । त्यसैले मेरो चलचित्र कप्सले अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको सफलताको कथा प्रस्तुत गरेको छ ।’ यसअघि दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका सम्राटले चलचित्र कप्सबाट निर्देशनमा हात हालेका हुन् । यही १७
May172019 by DangkhabarNo Comments
फ्राइडे रिलिज- सिक्वेल भर्सेस सिक्वेल !
काठमाडौं, जेठ ३– आज शुक्रवारबाट दुई नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् ।आजबाट प्रदर्शनमा आएका चलचित्र हुन्, ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’ । यी दुवै सिक्वेल चलचित्र हुन् ।३ वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘जात्रा’को सिक्वेल हो, ‘जात्रै जात्रा’ । यो चलचित्रलाई प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको कथा पनि प्रदीपले नै लेखेका हुन् । पैसा र सुनको कथालाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको चलचित्रमा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रविन्द्रसिंह बानिया, रविन्द्र झा, वर्षा राउत, राजाराम पौडेल, प्रकाश घिमिरे, सोहित मानन्धर लगायतको मुख्य अभिनय छ ।चलचित्रको निर्माता सिंगे लामा र यज्ञश्वर पौडेल हुन् भने कार्यकारी निर्मातामा रविन्द्र सिंह बानिया रहेका छन् । यसअघि बनेको ‘जात्रा’लाई दर्शकले रूचाएका थिए । यस चलचित्रलाई पनि दर्शकले रूचाउने अपेक्षा गरिएको छ ।चलचित्रले प्रदर्शनको पहिलो दिन राजधानीका मल्ट
May162019 by DangkhabarNo Comments
काठमाडौं, जेठ २ - 'जात्रा'को सिक्वल 'जात्रै जात्रा' शुक्रबार रिलिज हुँदैछ। सिनेमाका निर्देशक हुन् प्रदिप भट्टराई। उनी निर्देशित 'जात्रा' र 'शत्रु गते'ले दर्शकको मन जितेको राम्रैगरी जितेको थियो। अब तेश्रो सिनेमाबाट सफलताको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा प्रदीप छन्। सिनेमालाई लिएर मनको एक कुनामा सफलताको सिलसिलालाई कायम गर्ने एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब भएको उनको स्वीकारोक्ति छ। यसका बाबजुद उनी उत्साहित ज्यादा छन् किनकी टेस्ट शोमा उनले राम्रो प्रतिक्रिया पाए रे। आगामी रिलिज 'जात्रै जात्रा'को बारेमा गफ्फिँदा उनी 'कुल' नै देखिए। बरू उनले चौथो सिनेमा यी सिनेमाभन्दा फरक हुने खुलासा गरे। उनै प्रदीपसँग सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः तेश्रो सिनेमा रिलिज भईरहँदा तपाईंको दिमागमा के चलिरहेको छ? पहिलो र दोश्रो सिनेमा रिलिजको बेलामा त केही चल्दैचल्दैन थियो किनभने यो बेलामा पोस्ट
May152019 by DangkhabarNo Comments
‘कुम्भ करण’ ट्रेलर -गाउँकी शिक्षिका बनिन् निशा
काठमाडौं, जेठ १। नेपाली चलचित्र ‘कुम्भ करण’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । आउँदो जेठ १७ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रको ट्रेलरमा रोमान्टिक, सस्पेन्स र कमेडी विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यस चलचित्रमा अभिनेत्री निशा अधिकारी गाउँको एक विद्यालयको शिक्षिकाको भूमिकामा देखिएकी छिन् । त्यस्तै अभिनेता भोलाराज सापकोटा प्रध्यानाध्यापक, गौरव पहारी शिक्षक र अभय बराल पिउनको भूमिकामा देखिएका छन् । चलचित्रमा आकाश पल, कुलदिप अधिकारी, कमल गाउँले, सद्भाव थापा लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ । आकाश पल इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई दिपक वलीले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा महेश दवाडीको कथा, पटकथा तथा संवाद छ । चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा रोम वली रहेका छन् भने निर्मातामा क्षितिज बस्नेत र खड्क बुढाथोकी रहेका छन्।चलचित्रमा हरि लामाको छायांकन विनोद ढकाल, गोविन्द मधुर आचार्य
जेठ १ - लामो समय मह संचारमा अवाद्ध भएर काम गरेका निर्देशक प्रदिप भट्टराई आफ्नो तेश्रो प्रोजेक्ट ‘जात्रै जात्रा’ मार्फत दर्शकमाझ आउँदैछन् । जेठको ३ अर्थात शुक्रबारबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ उनका लागि ठूलो अवसर बनेर खडा हुँदैछ । प्रदिपले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र ‘जात्रा’ हिट भएको थियो । दोश्रो चलचित्र ‘शत्रु गते’ले बम्पर कारोबार नै गर्यो । प्रदिपले दुबै चलचित्रमा निर्देशकिय जादु छरेका थिए । उनै, भट्टराइको निर्देशनमा बनेको तेश्रो चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ दर्शकका लागि कौतुहल र उत्सुकतामा छ । विशेषगरि, चलचित्रको कमेडी शैली, कथावस्तु, पात्रहरुको अभिनय आदिले पनि दर्शकले यो चलचित्रलाई प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । ‘जात्रा’लाई दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका कारण पनि यसको सिक्वेल प्रतिक्षामा हुनु स्वभाविक नै हो । अर्कोतिर, यो चलचित्र हिट भएको खण्डमा प्रदिपले सफल निर्देशनमा ह्याट्रि
May132019 by DangkhabarNo Comments
वैशाख ३०- चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’को व्यापारले दंग देखिएकी नायिका आँचल शर्मा कहिलेकाही प्रेमको चर्चाले पनि रंगिने गर्छिन् । विशेषगरि, नायक पल शाहसँग उनको प्रेमको चर्चा चलेको केही समय भएको थियो । तर, अहिले चलचित्र बजारमा पल र आँचल अलग भएको चर्चा समेत चलेको छ । आँचल पलसँग आफ्नो सम्बन्ध प्रेम भन्दा माथि रहेको र पल र आफ्नो मित्रता सधै नै उस्तै रहने बताउँछिन् । तर, चलचित्र बजारमा नायिका आँचल शर्माको जीवनमा कोही मानिसको प्रवेश भएको समेत चर्चा छ । के बजारमा चलेको यो चर्चा सत्य हो ? आँचलले भनिन्–‘प्रेम गर्नु सामान्य कुरा हो । तर, अहिले म प्रेममा छैन ।’ आँचलले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बिषयमा धेरै कुरा बाहिर ल्याउन मन नलाग्ने समेत बताइन् । आँचलले भनिन्–‘कतिपय व्यक्तिगत कुरालाई देखाउन मन छ या छैन भन्ने कुरा मेरो निर्णय हो । म प्रेम वा मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा बाहिर आओस् भन्ने खासै चाहन्नँ । व्
May122019 by DangkhabarNo Comments
वैशाख २९- नायिका बर्षा राउतलाई सम्बोधन गर्दै नायिका बर्षा सिवाकोटीले लेखेको एउटा स्टाटस अहिले चर्चामा छ । दुबै नायिकाको चलचित्र रिलिज हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा नायिका सिवाकोटीले राउतको नाममा स्टाटस लेखिन् । उनले लेखिन्–‘खै कसले भनेछ हामी दुश्मन अरे । हामीले एक अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न सकेनौ अरे । हामी प्रतिस्पर्धी पक्कै हौला, एकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौ । त्यसलाई अस्विकार न तिमीले गर्न सक्छौ न मैले । एकै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टम लाग्नु स्वभाविक नै हो नी होइन र ?’ बर्षाले आफूहरु दुबैले कलाकारिता गरिरहेको भन्दै दुबै जनाको भोगाई एउटै भएको समेत उल्लेख गरेकी छिन् । बर्षाले एकैदिनमा आफूहरुको भिडन्त नभई हलमा एकसाथ आउन लागेको समेत लेखेकी छिन् । बर्षा सिवाकोटीको स्टाटसमा नायिका बर्षा राउतको जवाफ समेत आएको छ । बर्षा राउत लेख्छिन्–‘त्यही त है, हामीलाई थाहा नै नपाई एक अर्काको दुश्
May102019 by DangkhabarNo Comments
आकासको तस्बिर हेरेर चित्त बुझाउँदै पूजा
काठमाडौँ, बैशाख २७- लोकप्रिय जोडी पूजा शर्मा र आकास श्रेष्ठले एकसाथ स्क्रिन सियर गरेको ‘तस्बिरमै हो कि मैले’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ‘रामकहानी’ र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ गरी दुई चलचित्रमा एकसाथ देखिएका पूजा र आकासको जोडीलाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाएका छन्।सनुप पौडेल र निशा कँडेलको स्वर रहेको गीतमा विष्णुबाबु देवकोटाको शब्द तथा टीका दाहालको संगीत सुन्न सकिन्छ। गीतलाई राहुल प्रधानले एरेन्ज गरेका छन्। निकेश खड्काले निर्देशन गरेको भिडियमा बुद्ध थापाको छायाँकन ,सविना गुरुङको मेकअफ र सुबल थापाको सह निर्देशन गरेको छ।लभ स्टोरीमा बनेको म्युजिक भिडियो अडियो झैँ अब्बल बनेको छ। गीतलाई केबीए गोल्बलले निर्माण गरेको हो।